अमेरिकन एम्बेसीमा भिषा अन्तर्बातामा सोधिने प्रश्नहरू र सल्लाह : - Enepalese.com
अमेरिकन एम्बेसीमा भिषा अन्तर्बातामा सोधिने प्रश्नहरू र सल्लाह :
महेश भट्टराई २०७६ असार ७ गते १३:१६ मा प्रकाशित
सपनाको शहर अमेरिका जाने रहर कसलाई नहोला र । “पासपोर्ट त बनाइयो तर भिषा दिने नदिने निधो छैन हल्ला नगरौ है । दिएन भने इज्जत जान्छ।फलाना लाई त छोराछोरी तेतै हुदा पनि दुई तिन पटक सम्म भिषा दिएन रे ।गोप्य नै राख्नु पर्छ है ।”
अमेरिकामा घर भएको, राम्रो जागिर भएको,ब्यबसाय भएको, संम्पत्ति भएको, छोराछोरी भएको वा सबै भएको भएका हरूको आफन्त लाई पनि भिषा नदिएका उदाहरण हरू धेरै नै छन । गैर कानुनी वा शरणार्थी रूपमा बसेका परिबारको भिषामा कडाई गरेको सुनिन्छ ।
म यहां टुरिष्ट भिषाको कुरा गर्दैछु ।
के हेर्छन र सोध्छन त इन्टर भ्यू लिने कन्सुलर अधिकारीहरू ?
सामान्य प्रश्नहरू :
१ .कहा जादै हुनुहुन्छ ? न्यूयोर्क …
२ .कहिले जाने योजना बनाउनु भएको छ ? June …
३. किन जादै हुनुहुन्छ ? घुम्न र भेटघाट ..
४. पहिला अमेरिका जानु भएको थियो ? छैन ..
५ .कति समय बस्ने योजना छ ? १ … महिना
६ .अमेरिकामा गएर काम गर्ने योजना छ ? छैन
७ .अमेरिकामा तपाई आफन्त को को छन ? छ, छोरा छोरी
८ .कहा बस्नु हुन्छ ? छोरा/छोरी संग ..।यदि साथी वा आफन्त कहा बस्ने भए सम्बन्ध के हो र के गर्छन र कहा बस्छन ? साथी, न्यू योर्क, जागिर वा ब्यबसाय वा थाहा छैन !
९ .तपाई के काम गर्नु हुन्छ ? ब्यापार, शिक्षक …
१० .नेपालमा तपाईको परिबारमा को को छन ? २ छोरा १ छोरी नाती नातीना, बाबु आमा …
११ .तपाई नेपाल फर्कने आधार के छ ? जागिर, ब्यबसाय,पारिवारिक जिम्मेवारी
१ .नेपाल फर्कन बाध्य पार्ने आधार: जागिर, ब्यबसाय, सामाजिक वा पारिवारीक अवस्था/जिम्मेवारी,पद/हैसियत, आर्थिक बन्धन आदि।
२ .अमेरिका नबस्ने आधार : कतै ऊ अमेरिका गएर उतै त हराउदैन । गैर कानुनी रूपले त बस्दैन, सरकार थप ब्यह भार त पार्दैन भन्ने कुरामा ऊ सहमत हुनु पर्छ । अमेरिकामा मेरा सबै छोराछोरी, ठुलो घर संम्पत्ती छ भन्दैमा भिषा नदिन पनि सक्छ।
३ .पारिवारीक पृष्ठभूमी वा रेड फ्लाग : कतै पारिवारका अन्य सदस्यहरू अमेरिकामा गैर कानुनी रूपले बसेका वा शरणार्थी वा कुनै गैर कानुनी काम गरेका त छैनन भन्ने कुरा समेत हेर्न सक्छ।
४ .अमेरिकामा यदि साथी वा आफन्तले बोलाएर वा उसैकोमा बस्न जाने हो भने उक्त पारिवारको क्रेडिट हिस्ट्री र आर्थिक अबस्था समेत हेर्न सक्छ । कतै सरकार बाट गरिब बनि सुबिधा त लिएको छैन भन्ने समेत हेर्न सक्छ ।
इन्टर भ्यू मा सोधेको प्रस्नको उत्तर दिदा:
१ .प्रश्न सोध्ने अफिसरहरू निक्कै सरल, नरम, मिठो र बिस्तारै बोल्छन । पटक्कै नआत्तिनु होला ।
२ .सिधा, छोटो, स्पष्ट र सरल उत्तर दिनु होला ।
३ .फोटो खिच्दा चस्मा नलगाउनु होला ।
४ .शरिर र मुखको हाऊ भाउ (body language) लाई सामान्य राख्नु होला ।
५ .सामान्य कपडा लगाउनु होला ।
६ .नजानेको कुरा मिलाएर वा गलत वा अन्दाजमा नभनी स्पष्ट सिधा मलाई थाहा भएन वा थाहा छैन भन्नु होला ।
७ .आबेदन फारम भर्दा कुनै पनि गलत सुचना नभर्नु होला । के भरेको छ राम्ररी जान्नु होला र फरक कुरा नगर्नु होला ।
८ .फारममा भरेको सुचनाको आधारमा धेरै प्रतिशत भिषा दिने नदिने निधो गरि सकेका पनि हुन सक्छन ।
९ .अमेरिका टुरिष्ट भिषामा आउन सामान्यत आफ्नो मानिस, चिठी वा कुनै डकुमेन्ट आबस्यक पर्दैन ।optional: invitation letter, event,brochure, cards, w2,Bank statement,Travel Itinerary,Insurance,form I-134 …!
१० .सबै कुरा ठिकठाक हुदा हुदै पनि कहिले काहि निती, अबस्था, अधिकृतको मुड र तपाईको भाग्यले पनि साथ नदिन सक्छ ।
११ .एक पटक भिषा नदिदैमा पुन आबेदन भर्न नडराउनु होला । बरू कहा के गल्ति भयो भनि फारम र आफै लाई पुनर्मुल्याकन गर्न नभुल्नु होला।
भाग्यले तपाईको साथ र भिषा दुबै दिओस ! अमेरिकामा तपाई लाई स्बागत छ ।